Ahoana no fiasan'ny fitsaboana any UK? – ALinks
Tsy olom-pirenen'i Angletera hanome fitsaboana vonjy maika any amin'ny hopitaly NHS UK. Ny National Health Service dia iray amin'ireo rafitra fitsaboana tsara indrindra eran-tany. Saingy, miankina amin'ny firenena misy anao, mety ho tompon'andraikitra amin'ny sarany sasany ianao. Ny United Kingdom dia nanangana fifanarahana ara-pahasalamana mifanandrify amin'ny firenena vahiny maro.
Ny mpila ravinahitra dia tokony hanao teboka hisoratra anarana ho an'ny laharana NHS haingana araka izay azo atao rehefa tonga any UK. Anisan'izany ny firenena toa an'i Nouvelle Zélande sy Aostralia ary mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana. Na dia maimaim-poana aza ny fitsaboana hopitaly maika any UK. Ny ex-pats dia tsy maintsy misoratra anarana amin'ny laharana NHS mba handaminana fitsidihana mahazatra. Ny marary dia mety ho dokoterany, ary izy ireo no toerana voalohany hifandraisany amin'ny ankamaroany.
Ny NHS dia tsy rafitra mifototra amin'ny fiantohana fa rafitra mifototra amin'ny trano fonenana. Midika izany fa ny olom-pirenena UK rehetra, eny fa na dia ny ex-pats amin'ny serivisy maimaim-poana aza. Ireo mpitsidika any amin'ny Faritra Eoropeana na Soisa dia manan-jo hahazo serivisy NHS maimaim-poana amin'izao fotoana izao. Aoka hatao hoe manome ny karatry ny fiantohana ara-pahasalamana Eoropeana (EHIC) izy ireo. Saingy, rehefa miala amin'ny EU ny United Kingdom dia mety hiova izany.
Eritrereto hoe nahazo alalana tsy voafetra izy ireo mba hijanona ho olom-pirenena avy any ivelan'i Soisa. Afaka mampiasa maimaim-poana ny NHS toy ny olom-pirenena anglisy izy ireo. Ny olom-pirenena hafa tsy EU/EFTA dia manana fidirana maimaim-poana amin'ny serivisy. Toy ny fitsaboana maika sy ny fandrindrana ny fianakaviana. Mbola mila mividy fiantohana ara-pahasalamana izy ireo.
Ahoana ny fisoratana anarana amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana any Royaume-Uni?
Any Royaume-Uni, misoratra anarana amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana amin'ny alàlan'ny mpitsabo ankapobeny (GP). Azonao atao ny misafidy ny fomba fanao amin'ny GP anao. Na izany aza, ny sasany dia mety handà ny marary izay tsy mipetraka ao amin'ny faritra na raha ny fanao. Ny endrika GMS1 dia tsy maintsy amin'ny fandidiana (misy eto ihany koa). Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, mila manome:
· Fomba famantarana manan-kery
· Porofon'ny adiresy toy ny volavolan-dalàna avy any Royaume-Uni
Ny vidin'ny fitsaboana any UK
Ny ankamaroan'ny famatsiam-bola NHS dia avy amin'ny hetra mivantana. Ny UK dia nandany miliara £ 197.4 amin'ny fitsaboana amin'ny 2017. Ny isan-jaton'ny harin-karena dia mitovy amin'ny 9.6% amin'ny harin-karena isan-taona. Izahay dia manao an'i UK ho mpandoa vola fahafolo be indrindra amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana ao amin'ny EU/EEA/Switzerland.
Ny ankamaroan'ny serivisy ho an'ny olom-pirenena tsy misy vidiny. Saingy, misy sarany ho an'ny serivisy sasany. Ireo fiampangana ireo ho an'ny fitsaboana nify dia manomboka amin'ny £22.70 ho an'ny fitsaboana maika ka hatramin'ny £269.30. Ary koa, ho an'ny fitsaboana Band 3, ny saran'ny prescription amin'ny £ 9 isaky ny entana. Ny vondrona sasany dia tia ny olona ambany karama. Ireo izay mihoatra ny 60 taona dia tsy misy fiampangana NHS. Izany dia mihatra amin'ny vidin'ny nify sy ny vidin'ny prescription.
Dokotera sy manam-pahaizana manokana any UK
Ankoatra ny vonjy taitra, ny dokotera jeneraly eo an-toerana no POC voalohany amin'ny olana ara-pahasalamana. Afaka mamantatra aretina sy olana isan-karazany izy ireo. Toy izany koa ny manorata fanafody na manatona manam-pahaizana manokana raha ilaina.
Ny ankamaroan'ny fanaon'ny GP dia miasa amin'ny fotoana fanendrena. Maro koa no manome tolotra 'walk-in', izay misy mandritra ny ora roa maraina. Birao maro no mamela ny marary handamina fotoana amin'ny Internet. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma ny dokotera, ary raha mila fanampiana bebe kokoa ianao. Azonao atao ny miantso an-tariby aorian'ny ora na miantso ny 111 raha mila tari-dalana maika nefa tsy misy maika.
Ny fitsaboana ny ankizy any UK
Fanomezana tolotra mikendry ny fanatsarana ny fahasalaman'ny ankizy. Ny NHS dia miara-miasa amin'ny serivisy ho an'ny ankizy ao an-toerana. Ankoatra izany, manana masoivoho manokana isan-karazany. Pediatricians amin'ny NHS sy serivisy pediatric amin'ny Internet. Ny zanakao miaraka amin'ny dokotera fianakavianao. Afaka mahazo tolotra ara-pahasalamana matihanina ho an'ny ankizy ianao isaky ny mila azy ireo ianao.
Ny Foiben'ny Ankizy eo an-toerana dia manome tolotra ara-pahasalamana ho an'ny fianakaviana sy ny ankizy eo amin'ny fiaraha-monina. Ny mpitsabo mpanampy avy amin'ny NHS sy ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana ankizy hafa dia manome fitsaboana. Amin'ny sehatra toy ny fitantanana lanja sy ny fampinonoana. Misy ihany koa ny fandaharam-pianarana any an-tsekoly momba ny sakafo ara-pahasalamana, ny asa ara-batana ary ny fahasalamana ara-tsaina.
Fitsaboana ara-pahasalamana tsy miankina any UK
Raha oharina amin'ny firenena eoropeanina hafa. Ny UK dia manana isan-jaton'ny olom-pirenena mandoa fiantohana ara-pahasalamana tsy miankina. Saingy, ny tombony sasany amin'ny fiantohana ara-pahasalamana tsy miankina raha manana aretina na ratra ianao.
Ny marary tsy miankina dia manana fidirana haingana kokoa amin'ny manam-pahaizana manokana. Halaviro ny fotoana fiandrasana be loatra, ary manana fahafahana miditra amin'ny trano tsara kokoa. Raha tokony hizara paroasy amin'ny marary hafa. Matetika ny marary amin'ny fitsaboana tsy miankina no mahazo ny efitranony en-suite.
Ireto manaraka ireto ny sasany amin'ireo orinasa fiantohana ara-pahasalamana lehibe indrindra any Etazonia:
Cigna Samy ao anatin'ny rafi-pitsaboana maneran-tany ny fikarakarana ara-pahasalamana ho an'ny tena manokana sy ny fianakaviana. Ny premiums dia miankina amin'ny haavon'ny saronao, ny taonanao ary ny toe-pahasalamanao taloha.
Fomba fitsaboana hafa any UK
Ny NHS dia manana famatsiana voafetra. Any Royaume-Uni, afaka mahita fitsaboana hafa isan-karazany ianao. Ny osteopathie, ny fitsaboana kiropraktika, ny akupuncture, ary ny fitsaboana amin'ny zavamaniry dia ny sasany amin'ireo fitsaboana azo idirana. Ny mpitsabo dia tokony hiditra amin'ny fikambanana matihanina toy ny Federasionan'ny Therapist Holistic.
Ary koa, asa soa maro amin'ny fanomezana fikarakarana ara-pahasalamana any Royaume-Uni. Ny NHS dia naniraka ny sasany amin'ireo. Ity misy lisitry ny asa soa mifandraika amin'ny fahasalamana. Ity torolàlana momba ny fitsaboana hafa any Royaume-Uni ity dia manana fampahalalana fanampiny.
Maimaimpoana ve ny fikarakarana ara-pahasalamana any Royaume-Uni?
Ny NHS dia manome fikarakarana ara-pahasalamana maimaim-poana ho an'ny mponina anglisy rehetra. Anisan'izany ny hopitaly, ny mpitsabo ary ny tolotra ara-pahasalamana. Ny ankamaroan'ny teti-bolan'ny National Health Service dia avy amin'ny hetra mahazatra.
Tsara ve ny rafi-pitsaboana any Royaume-Uni?
Ny United Kingdom no voalohany teto an-tany tamin'ny tatitra 2017 Commonwealth Fund. Izy io dia nametraka ny rafi-pitsaboana any amin'ny firenena mandroso. Ary voalohany amin'ireto sokajy manaraka ireto: Fikarakarana ny fikarakarana sy ny fitoviana.
Ny Serivisy Nasionaly momba ny fahasalamana any Angletera (NHS) dia ekena ho iray amin'ny rafitra fahasalamana manerantany. Ireo olona tsy teratany anglisy dia mahazo alalana daholo fikarakarana vonjy taitra maimaim-poana any amin'ny hopitaly NHS UK. Saingy, ny sasany dia ho tompon'andraikitra amin'ny sarany sasany ianao, voafaritra amin'ny toerana misy ny firenenao. Ny UK dia nifampiraharaha momba ny fikarakarana fahasalamana mifamaly amin'ireo firenena vahiny isan-karazany. Anisan'izany ny firenena, Nouvelle Zélande, Aostralia ary mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana. Na dia maimaim-poana ho an'ny rehetra any Angletera aza ny fitsaboana amin'ny hopitaly vonjy maika, ny ex-pats dia tsy maintsy misoratra anarana amin'ny laharana NHS mba hanao fotoana mahazatra.. Ny GP dia mety manondro marary ary ho toerana voalohany hifandraisana amin'ny ankamaroan'ny olona. Ny mpila ravinahitra dia tokony hanao ho laharam-pahamehana ny fisoratana anarana ho an'ny laharana NHS avy hatrany rehefa tonga any UK.
Hopitaly tsara indrindra any Angletera
Ny fikarakarana ara-pahasalamana any Angletera dia tena marim-pototra. Hopitaly tsara indrindra any Angletera:
Ny hopitaly ao Wellington
Hopitaly King Edward VIIs
Rahavavy Agnes Beaumont Street, London, W1G 6AA, UK
Hopitaly Queen Elizabeth
Hopitalin'i St John & St Elizabeth
60 Grove End Road, St. John's Wood, London, NW8 9NH, UK
Hopitaly UK natolony any Londres
Betsaka ny hopitaly sy tsy miankina eny London fa tsy ny efitrano misy vonjy maika. Izay hopitaly manana efitrano vonjy maika no hanaiky anao tsy misy isa NHS. Ny fampahalalana bebe kokoa momba ny hopitaly any Londres misy rohy mankany amin'ny tranonkalany manokana dia azo jerena ao amin'ny NHS.
Ny Hopitaly Lister
Hopitaly Bridge London
Hopitaly London Welbeck
Hopitaly North Middlesex
Hopitaly Royal noho ny Neuro-fahasembanana
Hopitaly Masindahy Anthony, London
801 Làlana London, North Cheam, Sutton, Surrey SM3 9DW, UK
Hopitaly St Luke ho an'ny mpitondra fivavahana
Hopitaly St Pancras
4 St Pancras Way, Londres NW1 0PE, UK
Hopitaly Princess Grace
Hopitaly Weymouth Street
Ny sary fonony dia any Londres, UK. Sary avy amin'i Jay Mullings on Unsplash
Janoary 6, 2022
Oniversite tsara indrindra any UK Mba hahazoana fianarana !!
Janoary 8, 2022
Shina 05: fitsaboana, dokotera, klinika, fahasalamana ara-tsaina
Ronono oat tsara indrindra ampiasaina isan'andro any UK
Hopitaly tsara indrindra any Palestina